Mushariixinta oo Rooble kula kulmay Muqdisho [Sawirro] | KEYDMEDIA ONLINE
Mushariixinta oo Rooble kula kulmay Muqdisho [Sawirro]
Waxa uu kulanka kusoo aadayaa iyadoo Maalinta berri ah la filayo inuu Muqdisho ka dhaco banaanbax ballaaran oo Mucaaradka qorsheeyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shir gaar ah oo u dhaxeeya Musharixiinta Mucaaradka iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble [Rogane], ayaa Maanta ka furmay Hotel Dećale oo ku yaalla Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Madaxweyniyaasha Galmudug iyo HirShabeelle, Qoor-Qoor iyo Guudlaawe, ayaa ka qeybgalaya kulanka oo iyagu soo qaban-qaabiyeen, maadaama ay dhexdhexaadinayaan dowladda waqtigeedu dhamaaday iyo Musharixiinta.
Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa hogaaminaya Musharixiinta shirka ka qeybgalaysa, iyadoo ay wehliyeen kuwa kale oo CC Warsame uu kamid yahay, waxaana goobta kasoo muuqan Xasan Cali Khayre.
Xisbiga Himilo Qaran ayaa sheegay in ajandaha Kulanka uu la xiriira xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo rabashadaha ka dhashay Doorashada waqtigeeda kadib dhacday iyo Gabood falladii ay madaxda dowladda Federaalka geysatay 19kii Febraayo.
Kulanka ayaa waxaa miiska lasoo saarey qodobo ay labada dhinac midkoodna diyaar u ahayn inuu ka tanaasulo ama aqbalo, waxaana kamid ah in Farmaajo uu ogolaado in Musharixiinta laga qeybgeliyo shirka arrimaha doorashadda.
Beesha Caalamka ayaa sidoo kale shalay la kulantay Rooble oo kala hadashay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka dalka ka taagan, maadaama khatar gelinaysa xaalada taagan horumarkii amniga iyo dowlad dhiska laga sameeyay.
Rooble ayaa doonaya inuu baajiyo banaanbaxa Jimcaha, wuxuuna u balan-qaaday Musharixiinta in xafiiskiisa uu wax ka qabanayo tabashadooda, oo ay kamid tahay in raali-gelin laga siiyo weerarkii Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif lagu qaadey 18-kii bishan.